ဘာဖြစ်လို့ တချို့တွေက ခရက်ရ်ှပဲထားပြီး ရည်းစားမလိုချင်ရတာလဲ? - For her Myanmar
ဘာဖြစ်လို့ တချို့တွေက ခရက်ရ်ှပဲထားပြီး ရည်းစားမလိုချင်ရတာလဲ?
မင်မင်ကတော့ တစ်ယောက်တည်းကို ကြောင်ရတာ အားမရလို့
မရှိဘူး မရှိဘူး ခရက်ရ်ှတစ်ခါမှ မထားဖူးဘူးဆိုတဲ့ယောင်းတွေ ဖော်ဟာမြန်မာဖန်ထဲမှာမရှိဘူး ဒါပေမဲ့ အက်ဒမင့်လို ရုပ်ချောရက်နဲ့ ရည်းစားမထားဖူးတဲ့ သူတွေတော့ ရှိကြမှာပါ ဘာဖြစ်လို့ ရည်းစားမထားလဲမေးရင် “ကြိုက်မယ့်သူမှမရှိတာ”လို့နောက်ရွှတ်ရွှတ်ဖြေတတ်ပေမဲ့ တကယ်ကတော့ နက်နဲတဲ့ တခြားအကြောင်းတွေရှိပါတယ်။
ခရက်ရ်ှထားတာ လွတ်လပ်ပါတယ် ယောင်းရေ။ အခုနေ သူ့ကိုခရက်ရ်ှပြီး နောက်ငါးမိနစ်နေ နောက်တစ်ယောက် ပြောင်းခရက်ရ်ှလို့ ဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးပါဘူး၊ ပြဿနာမရှာပါဘူး။ ရည်းစားထားသလို သူ့မျက်နှာတကြည့်ကြည့်နဲ့ အလိုက်တသိအောက်ကျို့ခံ စိတ်အပင်ပန်းခံစရာမလိုပါဘူး။ ဝမ်းဂိုးတူးခမ်း နိယာမပေါ့။
Related Article >>> Third wheel မဟုတ်တော့သော 7th wheel ကျွန်မ
ချစ်သူဘဝမှာရတဲ့ ရင်ခုန်စရာထက် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တိတ်တခိုးလေးချစ်နေရတာက ပိုရင်ခုန်စရာ ကောင်းမှန်း ယောင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိကြမှာပါ။ တချို့ကရည်းစားထားရတာထက် အဲဒီလို ရင်ခုန်နေရတာလေးကို ပိုသဘောကျကြတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးဆိုရင် ခရက်ရ်ှကပြန်ကြိုက်လာရင်တောင် ခါချပြီး နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းခရက်ရ်ှမယ့်အမျိုး
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့ သူတချို့ရှိပါတယ်။ ဘဝမှာအချစ်ကြောင့် နာကျင်သွားတဲ့သူတွေပေါ့။ အဲဒီလိုလူတွေက ခရက်ရ်ှပဲထားကြပါတော့တယ်။ များသောအားဖြင့် ဆယ်လီခရက်ရ်ှတွေပေါ့။
ကိုယ့်စိတ်ထဲ ပုံဖော်ထားတဲ့သူနဲ့ ထပ်တူကျတဲ့သူရှာမတွေ့လို့ ရည်းစားမထားတတ်တဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အနားရောက်လာတဲ့သူက ဘယ်လောက်ပဲချောမောနေပါစေ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက် ရှာတွေ့လိုက်တာနဲ့ ဖီးငုပ်သွားပါပြီ။ ကိုယ်တကယ်သဘောကျတဲ့သူ ကျပြန်တော့လည်း ပိုင်ရှင်ရှိတာနဲ့၊ အသက်ငယ်တာနဲ့ ဘာနဲ့ညာနဲ့ နောက်ဆုံးတော့လည်း မဖြစ်နိုင်မှန်းသိသိနဲ့ ကိုယ်သဘောကျတဲ့သူကိုပဲ နှစ်နဲ့ချီပြီးခရက်ရ်ှရော
Related Article >>> သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက် ဆိုကြသူများ (Bff)
တချို့က ဘူးချင်လို့ကို ရည်းစားမထားတာမျိုးရှိတယ်နော်။ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ကောင်လေးချောချောမြင်ရင်ရှယ်မယ်၊ လမ်းမှာဖော်ရိန်နာ အရပ်ရှည်ရှည်ကြီးမြင်ရင် မျက်လုံးပြူးမျက်ဆံပြူးနဲ့ ငမ်းမယ်စသဖြင့် နှာခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကို နေ့ညမပြတ်လုပ်နေရရင် ရည်းစားနဲ့မမြဲမှာကြောက်တယ်ထင်ပါရဲ့။ အဲဒီတော့လည်း တစ်မိနစ် ငါးယောက်နှုန်းနဲ့ နှာခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းဆက်လုပ်ရော။
စင်ဂယ်ယောင်းတို့ထဲမှာရော အက်ဒမင်ပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့သူရှိကြလား မဟုတ်ရင်လည်း ဘာကြောင့်ရည်းစားမထားဘဲ ခရက်ရ်ှပဲထားရလဲဆိုတာ မန့်ထဲမှာမျှဝေပေးခဲ့ပါဦး။
မငျမငျကတော့ တဈယောကျတညျးကို ကွောငျရတာ အားမရလို့
မရှိဘူး မရှိဘူး ခရကျရျှတဈခါမှ မထားဖူးဘူးဆိုတဲ့ယောငျးတှေ ဖျောဟာမွနျမာဖနျထဲမှာမရှိဘူး ဒါပမေဲ့ အကျဒမငျ့လို ရုပျခြောရကျနဲ့ ရညျးစားမထားဖူးတဲ့ သူတှတေော့ ရှိကွမှာပါ ဘာဖွဈလို့ ရညျးစားမထားလဲမေးရငျ “ကွိုကျမယျ့သူမှမရှိတာ”လို့နောကျရှတျရှတျဖွတေတျပမေဲ့ တကယျကတော့ နကျနဲတဲ့ တခွားအကွောငျးတှရှေိပါတယျ။
ခရကျရျှထားတာ လှတျလပျပါတယျ ယောငျးရေ။ အခုနေ သူ့ကိုခရကျရျှပွီး နောကျငါးမိနဈနေ နောကျတဈယောကျ ပွောငျးခရကျရျှလို့ ဘယျသူမှစိတျမဆိုးပါဘူး၊ ပွဿနာမရှာပါဘူး။ ရညျးစားထားသလို သူ့မကျြနှာတကွညျ့ကွညျ့နဲ့ အလိုကျတသိအောကျကြို့ခံ စိတျအပငျပနျးခံစရာမလိုပါဘူး။ ဝမျးဂိုးတူးခမျး နိယာမပေါ့။
Related Article >>> Third wheel မဟုတျတော့သော 7th wheel ကြှနျမ
ခဈြသူဘဝမှာရတဲ့ ရငျခုနျစရာထကျ တဈစုံတဈယောကျကို တိတျတခိုးလေးခဈြနရေတာက ပိုရငျခုနျစရာ ကောငျးမှနျး ယောငျးတို့ကိုယျတိုငျသိကွမှာပါ။ တခြို့ကရညျးစားထားရတာထကျ အဲဒီလို ရငျခုနျနရေတာလေးကို ပိုသဘောကကြွတယျ။ ဒီလိုလူမြိုးဆိုရငျ ခရကျရျှကပွနျကွိုကျလာရငျတောငျ ခါခပြွီး နောကျတဈယောကျပွောငျးခရကျရျှမယျ့အမြိုး
ကိုယျခဈြတဲ့သူကို ဆုံးရှုံးရမှာကွောကျတဲ့ သူတခြို့ရှိပါတယျ။ ဘဝမှာအခဈြကွောငျ့ နာကငျြသှားတဲ့သူတှပေေါ့။ အဲဒီလိုလူတှကေ ခရကျရျှပဲထားကွပါတော့တယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ဆယျလီခရကျရျှတှပေေါ့။
ကိုယျ့စိတျထဲ ပုံဖျောထားတဲ့သူနဲ့ ထပျတူကတြဲ့သူရှာမတှလေို့ ရညျးစားမထားတတျတဲ့ သူတှရှေိပါတယျ။ ကိုယျ့အနားရောကျလာတဲ့သူက ဘယျလောကျပဲခြောမောနပေါစေ ကိုယျမကွိုကျတဲ့အခကျြတဈခကျြ ရှာတှလေို့ကျတာနဲ့ ဖီးငုပျသှားပါပွီ။ ကိုယျတကယျသဘောကတြဲ့သူ ကပြွနျတော့လညျး ပိုငျရှငျရှိတာနဲ့၊ အသကျငယျတာနဲ့ ဘာနဲ့ညာနဲ့ နောကျဆုံးတော့လညျး မဖွဈနိုငျမှနျးသိသိနဲ့ ကိုယျသဘောကတြဲ့သူကိုပဲ နှဈနဲ့ခြီပွီးခရကျရျှရော
Related Article >>> သူငယျခငျြး အရငျးခေါကျခေါကျ ဆိုကွသူမြား (Bff)
တခြို့က ဘူးခငျြလို့ကို ရညျးစားမထားတာမြိုးရှိတယျနျော။ ဖစျေ့ဘုတျမှာ ကောငျလေးခြောခြောမွငျရငျရှယျမယျ၊ လမျးမှာဖျောရိနျနာ အရပျရှညျရှညျကွီးမွငျရငျ မကျြလုံးပွူးမကျြဆံပွူးနဲ့ ငမျးမယျစသဖွငျ့ နှာခေါငျးလကေ့ငျြ့ခနျးကို နညေ့မပွတျလုပျနရေရငျ ရညျးစားနဲ့မမွဲမှာကွောကျတယျထငျပါရဲ့။ အဲဒီတော့လညျး တဈမိနဈ ငါးယောကျနှုနျးနဲ့ နှာခေါငျးလကေ့ငျြ့ခနျးဆကျလုပျရော။
စငျဂယျယောငျးတို့ထဲမှာရော အကျဒမငျပွောတဲ့အခကျြတှနေဲ့ တိုကျဆိုငျတဲ့သူရှိကွလား မဟုတျရငျလညျး ဘာကွောငျ့ရညျးစားမထားဘဲ ခရကျရျှပဲထားရလဲဆိုတာ မနျ့ထဲမှာမြှဝပေေးခဲ့ပါဦး။
Tags: Crush, Facebook, fear, Free, Fun, heartbeat, love
မိုးရာသီမှာ ကလေးငယ်တွေကို ဖျားနာခြင်းနဲ့ ကင်းဝေးအောင်ထားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)သွယ်
ယောင်းရဲ့ချစ်ချစ်ကောင်လေး မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ ယောင်းရဲ့အခြေခံအလှအပရေးရာ…
Christina Rosy May 20, 2019
အဖေများနေ့မှာ ယောင်းတို့ဖေဖေကို လက်ဆောင်ပေးသင့်တဲ့ ပစ္စည်း (၅) မျိုး
Stella June 14, 2019
ယောင်းရဲ့ သွေးအမျိုးအစားအရ ယောင်းရဲ့ အချစ်ရေးအခြေအနေ ဘယ်လို ရှိနိုင်လဲ?
Facebook အကောင့်ပိတ်လိုက်တာနဲ့ အကောင့်ဖျက်တာက ဘာကွာခြားလဲ???
Phyu Thant June 10, 2019
နံပါတ် (၁) ဂဏန်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အပြုအမူတွေက ဘယ်လိုရှိလဲ?
Stella June 10, 2019